Aiza no hitadiavana asa raha manolo-tena amin'ny tontolon'ny famolavolana sary | Famoronana an-tserasera
Aiza no hitadiavana asa raha manokan-tena amin'ny tontolon'ny famolavolana sary ianao
Judith Murcia | | maro
Mitady asa ianao Ary tsy fantatrao hoe aiza no hanombohana Raha mahita tolotra fotsiny ianao tsy mifanaraka amin'ny mombamomba anao izy ireo, asa na tanjona dia midika fa tsy mijery amin'ny toerana mety ianao.
Ny sehatr'asa matihanina tsirairay dia mihetsika fironana samihafa, rehefa manomboka eo amin'ny tontolon'ny matihanina ianao ary mifandray amin'ireo mitady asa mifanaraka amin'ny safidinao kokoa Tsy dia sarotiny toa ny tamin'ny voalohany izy io.
Ny fahalalana hoe aiza no jerena no lakilen'ny fitadiavana a asa voalohany. Amin'ity lahatsoratra ity dia hanome anarana hevitra sy vavahady vitsivitsy izay tsy azonao adino ianao raha mitady fahitana.
1 Fandraisana an-tserasera
2 Varavarana asa
Ny dingana voalohany hahitana asa dia ny fananana a kitapo amin'ny haavon'ny tetikasanao hiantohana izany fantatry ny orinasa ny asanao, endrika sary ary amin'ity fomba ity, dia misy fiatraikany tsara voalohany aminao.
Manana a portfolio amin'ny Internet, izany hoe mihantona amin'ny harato dia fomba tsara hanombohana hampahafantatra ny tenanao. Ny sasany amin'ireo vavahady malaza indrindra amin'ny mpamorona sary dia ireto manaraka ireto:
Raha vantany vao manana ny asa teo aloha isika amin'ny fanaovana portfolio manokana sy CV, ny dingana manaraka tolotra asa fikarohana. Ny fangatahana rindranasa izay mifanaraka amin'izay tadiavintsika dia tsy mora fa tsy azo atao izany. Tokony ho fantatrao hoe aiza no jerena.
Amin'ity tranga ity, ny tontolon'ny mpamorona sary dia mihombo ny fifaninanana ary nitombo ny fangatahana. Ny vavahady asa malaza indrindra ankehitriny dia Linkedin y Infojobs, fa aza adino fa misy maro hafa manam-pahaizana manokana eo amin'ny tontolon'ny famolavolana, famoronana, fandaharana, sns. Manondro, ohatra, izahay amin'ny vondrom-piarahamonina antsoina Domestika, izay ankoatry ny fampianarana mahaliana dia manome a dobo asa be dia be.
Tadidio izany tsy tokony hametra ny tenantsika isika handefasana CV manokana amin'ireo tolotra asa navoaka tamin'ny Internet, azonao atao foana ny mandefa filatsahan-kofidina. Azonao atao ny mitady ny masoivoho izay manintona ny sainao indrindra na noho ny lazany, ny tetik'asa na ny toerana misy azy ary mahazo ny mailaka ifandraisany. mandefa taratasy fanakonana mivantana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Aiza no hitadiavana asa raha manokan-tena amin'ny tontolon'ny famolavolana sary ianao
Ovao ny haben'ny sary amin'ny alàlan'ny fitsikilovana artifisialy an'i Thumbor
Marika 100 ambony 2018 naseho